Aha ndị ozi 35 na-eme njem nlegharị anya UNWTO na-ezube imetụta ntuli aka
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Aha ndị ozi 35 na-eme njem nlegharị anya UNWTO na-ezube imetụta ntuli aka
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • News • ndị mmadụ • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Ego njem | Atụmatụ njem • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
UNWTO: Ighagharia ohuru nke ndi njem
Ruo ugbua ndị ozi njem nlegharị anya na mba iri atọ na ise a agbachi nkịtị. Otu onye ozi gwara eTurboNews na ndekọ: "Gịnị kpatara m ga-eji buru olu m n'olu?" Typedị echiche a nwere ike ịbụ isi ihe ga-eme ka ihe ịga nke ọma maka odeakwụkwọ odeakwụkwọ UNWTO na-enweghị isi iji metụta nsonaazụ ntuli aka ọ chọrọ mmeri.
Nke a bụ ndepụta nke mba 35. Ugbu a emeela ka mba niile mara banyere atụmatụ a, na azịza ma ọ bụ omume na-echere.
Iran (islam Republic of)
Chepụtara site na onye isi uche nke ndọrọndọrọ ọchịchị
Tọ Obodo nke Madrid ddeziri otu ibe na weebụsaịtị ya iji dọọ ndị ọbịa aka na ntị ka ha ghara ịga obodo a wee depụta ihe mgbochi niile, oge ị ga-achịkwa, na mmechi iwu.
Ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị maka njem nleta na Spain www.spain.info leghaara COVID-19 anya, mana Embasii US na Madrid gwa ihe ndị a:
N'ihi COVID-19 Spanish igbochi njem, ụmụ amaala US enweghị ike ịbanye na Spain ọ gwụla ma ha ga-ezute ihe a kapịrị ọnụ ma ọ bụ nwetaworị ikike pụrụ iche n'aka Gọọmentị Spain. Tụkwasị na nke ahụ, ụmụ amaala US ndị na-esite na United States ma ọ bụ ụfọdụ mba ndị ọzọ ga-egosi nsonaazụ PCR na-adịghị mma ewepụtara n'ime awa 72 tupu ịbata ma mezue adị Njikwa Ahụike (Lee Ntinye Ntinye na Ọpụpụ chọrọ n'okpuru).
Isi nke World Tourism Organisation UNWTO na Madrid na December 8 zipụrụ ntụziaka maka ndị njem na-ahụ maka njem nleta na mba 35 so na ndị na-anọchite anya kọmitii ndị isi. Kọmitii a ga-ezukọ na Madrid na Jenụwarị 18 na 19 iji họpụta Onye odeakwụkwọ Ọchịchị ọhụrụ. Zurab bụ otu n’ime ndị abụọ ga-aga ime ya ma mee ka ọ ghara ikwe omume inweta onye asọmpi. Naanị onye asọmpi nwere ike ịbịa na nkeji ikpeazụ bụ Ms Shaikha Mai Bint Mohammed Al-Khalifa nke si mba Bahrain. Ọbụna Bahrain edehiewo na nkwenye gọọmentị nke UNWTO nyere.
6 mba ndị ọzọ họpụtara ndị ga-aga ime ntuli aka. N'ihi enweghị oge na ihe ijuanya nke obere oge mmejọ ndị ụkọchukwu wepụrụ 6 chọrọ ntinye aha.
Zurab Pololikashvili bụ onye kpara arụ n’ọrụ a nke ụfọdụ mba iri atọ na ise nwere ike ghara ịma maka ya.
Ruo afọ 2, Secretary General gbooro mkpa nke ndị otu 35 a na-eme ka o yighị ka ọtụtụ n'ime ha ịtụ vootu megide ya. Enwere ọrụ akụ na ụba, nzukọ dị mkpa, nkwa maka ọnọdụ dị mkpa, okwu nke ndị ozi mba ofesi na-akparịta ụka, yana ịtụ vootu, yana ọtụtụ ndị ọzọ na ndị ọkachamara 35
Secretary General UNWTO Zurab Pololikashvili duhiere ndị otu a 35 na Septemba afọ a iji kwenye ịkwaga ntuli aka UNWTO site na Mee ruo Jenụwarị 2021. Onye odeakwụkwọ ukwu rụrụ ụka na Georgia na ọ chọrọ iwepụ njem na-enweghị isi maka ndị otu ndị otu kansụl Executive. Ihe kpatara ya bụ maka usoro FITUR - ihe ngosi ahia ọtụtụ ndị ozi na-agakarị na Madrid. Emere ngosi ahia a na Madrid maka Jenụwarị 18-19. Zurab amaraworị banyere atụmatụ FITUR ị yigharị.
Naanị otu izu ka e mesịrị, FITUR yigharịrị na May mgbe Madrid banyere mkpọchi. O mere ka Madrid ghara ịdị ize ndụ maka njem. Kama ịghaghachị nzukọ ntuli aka ozugbo ọ dị, Zurab na-amanye ndị ozi ka ha banye n'ụgbọelu wee bịa Madrid naanị maka votu Jenụwarị 18-19. Ọ maara nke ọma na nke a agaghị eme, ọ ga-emerikwa na ntuli aka a.
Dabere na Zoltan Somogyi, onye bụbu onye isi nchịkwa na World Tourism Organisation, atụmatụ a nwere ike ịbụ nke iwu kwadoro, mana ọ bụ ezigbo ụkpụrụ.
Kedụ maka ịhapụ ndị otu kansụl Executive Council ịtụ vootu na kọmputa?
N'ime akwụkwọ ozi ụbọchị asatọ nke ọnwa Disemba, UNWTO gwara ndị ọrụ nchekwa na ha ga-agwa mba na vootu elektrọnik agaghị agụta.
Akwụkwọ ozi UNWTO degaara ndị otu Council Executive yaBudata site na ntaneetị
Nke a bụ akụkụ dị mkpa nke leta ahụ:
Dabere na Iwu 29 nke Iwu Usoro ya na usoro iwu na usoro dị ogologo na-etinye maka nhoputa maka ọkwa nke Secretary General, mepụtaghachiri n'ime nke a n'okpuru Nkebi nke Atọ n'okpuru, Kansụl ga-atụ aro ya na nzukọ nzuzo site na ntuli aka nzuzo. .
Iwu nke usoro nke Executive Council na Gukpụrụ Nduzi maka Omume nke Ntuli Aka site na Ntuli Aka Nzuzo (agbakwunye na usoro nke usoro nke General Assembly), yana
iwu ndị dị ogologo a kpọtụrụ aha n'elu, ka edepụtara n'ụzọ na-egosi na ndị otu na-anọ ya na nzukọ ahụ na nzuzo. Agbanyeghị, na ọnọdụ zuru ụwa ọnụ ugbu a nke nzukọ nzukọ nke mmadụ na Kansụl na-eweta nnukwu ihe ịma aka na nnukwu nnọkọ na-akụda mmụọ n'ụwa niile, ọ dị oke mkpa ịchọpụta ụzọ nwa oge na ụzọ pụrụ iche iji hụ na ọ na-eme mkpebi ndị dị oke mkpa maka ịrụ ọrụ kwesịrị ekwesị Organizationtù ahụ.
Na mmetụta a, ndị otu kansụl nakweere site na usoro ịgbachi nkịtị mkpebi "Usoro pụrụ iche na-achị Executive Council n'oge ọrịa COVID-19" 2 na-akọwapụta pụrụ iche
iwu na-achịkwa omume nke nnọkọ nke onye nnọchi anya na nke mmadụ na Kansụl n'oge ọrịa COVID-19 na-enye ikike Onye isi oche nke Kansụl, yana nkwado nke Secretary General, iji nwee nnọkọ nke kansụl ahụ dịka ijide nke nzuko n'onwe onye abughi ihe bara uru n'ihi oria ojoo a, na ime ka ndi otu nile mara mkpebi di otua ubochi iri tupu mmeghe nke nzuko.
Nkà na ụzụ pụtara ugbu a na odeakwụkwọ anaghị ekwe ka agbanyeghị, ijide ntuli aka nzuzo na ntanetị kama ọ bụ naanị mmadụ. N'ezie, ọ nweghị òtù na-achị isi nke nzukọ ọ bụla ọzọ nke usoro United Nations nwere akara ntuli aka nzuzo na ntanetị.
N'ihi nke a, ọbụlagodi nnọkọ nke ngwakọ (ntanetị na mmadụ) nke kansụl ahụ, na ihe dị na nkwenye nke onye a họpụtara ka ọ bụrụ onye isi odeakwụkwọ, Ndị otu tozuru oke ịtụ vootu ga-anọ ya n'oge mkparịta ụka a. ndị oghere mmeri (“nzukọ nzuzo na-egbochi ha”) na oge nhọpụta nzuzo (“nzukọ nzuzo nke onwe”). Iji mee nke a, ndị nnọchi anya ndị otu ịtụ vootu ga-enwe opekata mpe otu onye ga-anọ n'anụ ahụ na nzukọ nzuzo niile ma nwee ikike ịtụ vootu.
Na nchikota, onye nnochite anya onye otu ịtụ vootu nke kansụl nọ ya na nzukọ nkeonwe (“onye nhoputa aka”), ọ bụrụ onye otu ndị nnọchi anya ya ma ọ bụ onye otu nnọchi anya (onye nnọchiteanya), ga-enwerịrị ikike na ikike. iji mee ntuli aka n’aha ya.
Ọfịs ahụ chetakwara na ọtụtụ ndị otu Mba ahọpụtara ndị nnọchi anya ha na alaeze nke Spain ka ha bụrụ ndị nnọchi anya na nzukọ na ikike zuru oke iji nọchitere ha na nzukọ ndị otu na-atụ vootu n'aha ha, dịka omume nke òtù ndị ọzọ nke usoro United Nations.
N'ihe banyere nhọpụta nke ndị na-ekwu okwu dịka thekpụrụ Nduzi Maka Omume nke Ntuli Aka site na Nzuzo Nzuzo, Onye isi oche nke Kansụl ahụ ga-ahọpụta ndị nkwupụta abụọ (2) si n'etiti ndị otu kansụl nke ndị nnọchi anya ha nwere ihe karịrị otu ndị ọzọ nọ ke Mbono.
N'ikpeazụ, iji mee ka ihe nzuzo dị mkpa nke nzukọ ahụ dabere na iwu, enweghị ike ịntanetị na-aga n'ihu n'oge nzukọ nzuzo na-egbochi, yana n'otu aka ahụ, ọ nwere ike ịbụ
egbochikwala mgbe a na-etinye vootu na nzuzo.
N’izu gara aga, akpọtụrụ mba niile na akwụkwọ edemede site n'aka onye odeakwụkwọ UNWTO n'oge gara aga Dr. Taleb Rifai, na site n'aka Francesco Frangialli, iji rịọ mgbanwe nke ụbọchị ntuli aka ahụ. Ruo ugbu a ọ nwebeghị mba zaghachiri n'ihu ọha.
World Tourism Network na otu narị otu narị ndị otu ya kpọrọ maka dobi ụtọ na UNWTO Election Process. Ọ dịghị nzaghachi UNWTO natara.
E zigara akwụkwọ na Secretary General nke United Nations na New York ụnyaahụ, nzaghachi na-echere.
Nke a bụ ebe e zigara akwụkwọ ozi ahụ:
Ndị isi Council
Ọ Mazị Fuad Naghiyev
Onye isi oche nke State Tourism Agency
Ọ Maazị Zayed Rashed Alzayani
Mịnịsta ụlọ ọrụ na azụmahịa na njem nleta
Ọ B Mr. Mr. Marcelo Álvaro Antônio
Ọ Mr. Mazi Carlos Jorge Duarte Santos
Mịnịsta nke njem na njem
Kpaa. Sr. José Luis Uriarte
Minista de Economía, Fomento y Turismo
Ọ Mazị Heping Hu
Mịnịsta na-ahụ maka omenaala na njem nlegharị anya
Ministri nke Omenala na njem nleta nke ndị Republic of China
Ministre du Tourisme et de l'Environnement, en ụgwọ du Développement na-adịgide adịgide
Ministre du tourisme na Loisirs
Mịnịsta nke njem na ihe ochie
Minista maka Europe na Ofesi, Minista France
Ntụziaka nke ụlọ ọrụ, de l'economie internationale et de la promotion du tourisme (DEEIT)
Ọ Mazi Harry Theoharis
Syn Mynor Arturo Cordón Lemus
Onye Isi Nduzi
Itlọ Akwụkwọ Guatemalteco de Turismo (INGUAT)
Kwaa. Ibekwe Nicole Marderr
Ministra nke Turismo
Ọ Maazị Prahlad Singh Patel
Minister nke State for Culture and Tourism (Independent Charge)
Ozi nke njem, Gọọmentị India
Minister of Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts of Islamic Republic of Iran (MCTH)
Ọ Mazi Dario Franceschini
Mịnịsta nke Omenala, Omenala omenaala na njem nlegharị anya
Ọ bụ Maazị Kazuyoshi Akaba
Mịnịsta ala, akụrụngwa, Transportgbọ njem na njem nleta
Hon. Maazị Najib Balala
Onye ode akwukwo nke ndi njem na ndi ndu
Ministri na-ahụ maka njem nlegharị anya na anụ ọhịa
Ọ Mr. Mr. Rimantas Sinkevičius
Mịnịsta nke Economy na Innovation
Mịnịsta nke gburugburu, oke ọhịa na njem nlegharị anya
Ọ Nwada Claudia Eugenia Cornejo Mohme
Mịnịsta nke ahia na njem nleta na mba ofesi
Ọ Mazi Pedro Siza Vieira
Mịnịsta nke Economy, Portugal
Ọ Maazị Yangwoo Park
Ọ Mr. Mr. Virgil-Daniel Popescu
Ministry of Economy, Energy na gburugburu ebe obibi
Oriakụ Zarina Doguzova
Onye isi nke Federal Agency for Tourism
Federal Agency maka njem nleta nke Russian Federation
Ọ Mr. Mazi Ahmed bin Aqil Al Khateeb
Ọ Maazị Alioune Sarr Mịnịsta nke njem na njem ụgbọelu
Ọ bụ Louis Sylvestre Radegonde
Kwaa. Ibekwe Da. María Reyes Maroto Illera
Ministra de Industria, Comercio na Turismo
Onye nlekọta nke Ministry of Culture, Tourism and Antiquities
Ozi nke Omenala, njem na ihe ochie
Ọ Maazị Phiphat Ratchakitprakarn
Mịnịsta nke njem na egwuregwu
Ọ Mazị Mehmet Nuri Ersoy
Hon. Nkọwa nke Mangaliso Ndlovu
Mịnịsta nke gburugburu, njem na njem nleta